सु’शान्त आ’त्मह’त्या प्रकरण: भि’सेरा रिपोर्टले गर्‍यो यस्तो खुलासा – Rapti Khabar
सु’शान्त आ’त्मह’त्या प्रकरण: भि’सेरा रिपोर्टले गर्‍यो यस्तो खुलासा
काठमाडौं, असोज १३, बलिउड अभिनेता सु’शान्त सिंहको भि’सेरा रिपोर्टले उनको शरीरमा कुनै जैविक वि’ष नपा’इएको खु’लासा गरेको छ।
सु’शांत केसमा एम्स प्यानलले सी’बी’आईलाई बुझाएको प्रतिवेदनले उनको भि’सेरामा कुनै विष नभेटिएको स्पष्ट गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। एम्सका डाक्टरहरुले सुशा’न्तलाई कुनै वि’ष नदि’इएको र उनको शरी’रमा कुनै पनि प्रकारको वि’ष नमिलेको बताएका हुन्
एम्सको रिपोर्ट र सी’बीआई अ’नुसन्धान मिल्दो’जुल्दो रहेको भए पनि अहिलेसम्म कु’पर अस्पतालका डाक्टरहरुलाई पूर्ण सफाइ नदिइएको बताइएको छ।
अनु’सन्धा’नमा कुपर अस्पतालको रिपोर्टलाई विस्तृत रूपमा हेर्न भनिएको छ। कूपर अस्पताल अझै सं’काको घेरामा रहेको छ।
एम्सको रि’पोर्टले कुपर अस्पतालले सु’शान्त केसमा लापरवाही गरेको सं’केत गरेको छ। सु’शांतको पोस्टमा’र्टम कुपर अस्पतालका डाक्टरहरूले गरेका थिए। जसमा प्रश्न उठाइयो। रिपोर्टमा सु’शान्तको घाँ’टीको निशा’नाबारे र मृ’त्युको स’मयबारे केही पनि बताइएको थिएन।
सु’शान्तको परिवारकातर्फबाट उनका परिवारका वकिलले मृ’त्यु हुनु अघि सु’शांतलाई वि’ष दिएको आ’शंका गरेका थिए। तर, एम्सको रिपोर्टबाट सु’शांतलाई कुनै किसिमको वि’ष नदिइएको स्पष्ट भएको छ। सु’शान्तको परिवारले सु’शांतका बुबाले रि’या’ले छोरालाई ला’गुऔ’षध दिएको आ’रोप लगाएका थिए।
सु’शान्त आ’त्मह’त्या प्रकरण: बाहिरियो च्याट
बलिउड अभिनेता सु’शान्त सिंह राज’पूतले गत जून १४ बान्द्रास्थित आफ्नै घरमा झु’ण्डि’एर आ’त्मह’त्या गरे ।
त्यसपछि उनको आ’त्मह’त्या केसबारे अनुसन्धान भईरहेको छ । अहिले उनको आ’त्मह’त्याको केस सी’बी’आईले हेरिरहेको छ ।
यसैबीच सु’शान्तकी प्रेमीका तथा बलिउड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती र उनका भाई शोविक च’क्रवर्तीको ह्वा’ट्सएप च्याट बाहिरिएको छ ।
२०२० को ह्वाट्सएप च्याटमा रियाले कोहि व्यक्तिको बारेमा उनलाई बताएकी छन् ।
जसमा उनले ४ पटक ड्र’ग्स भरेर सिग’रेट तानेको बताएकी छन् । साथै उनले सिदा आफ्नो भाईसँग ड्र’ग्सको डि’माण्ड गरेको पनि देखिएको छ ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार १५ मार्च २०२० को यो च्याटमा रियाले भाई शोविकसँग यस्तो कुरा गरेकी छन् ।
रिया : हजुर प्लिज
रिया : उ एक दिनमा ४ स्मो’क गर्दछ, त्यसैले त्यहि हिसावमा हेर ।
शोविक : र B’UD डोज पनि उसलाई चाहिन्छ ?
रिया : हजूर B’UD पनि
शोविक : हामी ५ ग्राम B’UD डोज लिन सक्छौँ ।
शोविक : यो २० डब्स हुन्छ (२० सिगरेट बन्छ)
कोरनाको खोपबारे रुसबाट आयो खुशीको खबर
१९ भदौ, काठमाडौं । रुसको कम्पनीले निर्माण गरेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्धको खोपको क्लिनिकल परीक्षणको शुरुवाती चरणको नतिजा सकारात्मक देखिएको छ । मेडिकल जर्नल द लेसेन्टमा प्रकाशित सूचनाअनुसार क्लिनिकल परीक्षणको दुई चरणमा खोपले कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न आवश्यक एन्टिबडी विकास भएको पाइएको छ । ७६ जना मानिसमा गरिएको यो परीक्षणमा सहभागी मानिसहरुमा कुनै ज्वरो आउनेजस्ता सामान्य […]
को बन्ला विद्युत् प्रा’धिकरणको सीईओ ? यस्तो छ भित्री कुरा
सुनिता कार्की २४ भदौ काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नयाँ कार्यकारी निर्देशक कसलाई बनाउने भन्ने सम्बन्धमा आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकले टुंगो लगाउने बताइएको छ। अहिलेसम्मको स्थिति मूल्यांकन गर्दा कुल’मान घिसि’ङ नै दोहोरिने सम्भावना रहेको बताइएको छ। कुल’मान घि’सिङलाई नै प्राधि’करणको कार्यकारी निर्देशकमा दोहोर्‍याउने गरी मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव तयार पारिसकेको प्राधिकरण उच्च स्रोतले बताएको छ। यही बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् […]
८ असोज, काठमाडौं । देशभर जारी वर्षा शनिबारसम्मै कायम रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । शनिबारबाट भने मौसममा क्रमिक सुधार हुँदै जाने मौसमविदको भनाइ छ । मौसमविद प्रतिभा मानन्धरले भनिन्, ‘आज र भोलि देशभरि नै वर्षा हुन्छ । एकछिन रोकिने र फेरि पानी पर्ने क्रम चलिरहन्छ । केही स्थानमा […]
दशैं र कोरोना : के लकडाउन हुन्छ र ?
काठमाडौँमा एकैदिन ७ सय ४७ जनामा कोरोना पुष्टि, कुन जिल्लामा कति थपिए ? विवरणसहित]